तपाईं सँधै ब्लगि Be हुन सक्नुहुन्न Martech Zone
शुक्रबार, जुन 6, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जब म लोग्नेहरु लाई ब्लगिंग को बारे मा बोल्छु, तिनीहरु धेरैले मलाई सोध्यो यदि ब्लगिंग यहाँ छ कि छैन।
कसैलाई सोध्नु कि यदि ब्लगिंग सदाको लागि यहाँ छ भने केटाहरू सोध्नु जस्तै हो कि आफ्नो अखबार गुटेनबर्गको साथ प्रिन्ट गर्दै थिए। नि: शुल्क प्रेस जस्तै ब्लगि technology टेक्नोलोजीसँग विकसित हुन्छ, विशाल फलोइंगहरूसहित ब्लगरहरू किन्नेछ, र ब्लगहरू एकीकृत हुनेछन् र अन्य संचार माध्यमहरूमा इम्बेड हुन्छन्।
ब्लगिंग द्रुत हुँदै गइरहेको छ को मध्यम र कर्पोरेसनको लागि रणनीति, तर यसले लामो समय लिने छैन यसले फूल्दा ​​अहंकार 'अर्को संचार विधि' मा फिर्ता जान्छ जुन साइनेज, स्थान, ईमेल, वेब साइटहरू, र सोशल मिडिया अन्तरक्रियाको साथ त्यहाँ छ।
प्रतिभाशाली ब्लगरहरू कम्पनीहरूलाई सुई सार्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। आगामी केहि बर्ष ब्लगर्सका लागि उत्तम हुनेछ, जसलाई परामर्श वा पूर्ण-समयको आधारमा ठूला संस्थाहरूबाट बढाइनेछ। यो सुन्न राम्रो छ, हैन? यसको मतलब यो सम्पूर्ण चीज यसको लागि लायक छ - इमानदारीता र पारदर्शिता गर्न सक्छन् तपाइँको सफलता ल्याउन।
त्यो नोटमा, बधाई छ लोरेन फेल्डम्यान, एक सफल ब्लगर जो सी | नेट को लागी केहि लेखन र भिडियोहरु गरिरहेको छ।
साईड नोट: जब म लोरेनको रास्पीमा कस्सिरहेको छु, कस्टिंग गर्दै, तपाईंको अनुहारमा, पूर्वी कोस्ट भेन्ट्स ... वा असजिलो हुँदै उसको ओछ्यानमा बसिरहेको देख्दछु - म उहाँको पारदर्शिता र उसको सफलता दुबैमा आश्चर्यचकित छु। उसले देखाउँदछ कि तपाईं इमानदार हुन सक्नुहुन्छ, आफै हुनुहोस्, राय दिनुहोस्, र अझै पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ।
कहाँ ब्लगि Go जाँदै छ?
भविष्यमा ब्लगि toमा केहि नयाँ चीज आउँनेछ, अखबारहरू जस्तै… तर यसले सय पचास वर्ष लिने छैन। भविष्यको ब्लगरको मेरो दर्शनमा भाषण-बाट-पाठ आवाज मान्यता समावेश हुन सक्दछ जुन व्याकरण फ़िल्टरमा पारित भयो, स्मार्ट एल्गोरिदमसँग जुन सामग्रीलाई व्यवस्थित गर्दछ, र स्वत: उत्पन्न ईन्ट्र्याक्टिव 'दृश्यहरू' वेबमा उपलब्ध सम्बन्धित विषयहरूमा।
भविष्यमा कर्पोरेट ब्लगि the मार्केटिंगमा फिर्ता आउनेछ, हामी यसलाई नरकको जस्तै लडिरहेका छौं, आज पनि यसलाई बाहिर राख्नको लागि। हामीले अब लडाई गर्नुको कारण भनेको हो कि मार्केटिंग पुरस्कार प्राय: पूर्णता, सौन्दर्य र शुद्धिकरणका लागि दिइन्छ - परिणामहरू होइन, वास्तविकता र पारदर्शिता। मौसमी मार्केटिंग कार्यकारीको क्यूबिकल फार्ममा ब्लगरहरू र ब्लगिging फिट हुँदैन।
एक पटक कम्पनीहरूले महसुस गरे कि उनीहरूको सफलतालाई उनीहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा कुराकानी गर्छन् र आफ्ना ग्राहकहरू र सम्भावनाहरू माथि सम्बन्ध बढाउँछन्, मार्केटिंग डिपार्टमेन्टहरू ब्लागमा प्राप्त गर्न बलहरू कसैको प्रशंसा गर्न र यसलाई जस्तो छ भनि बताउन थाल्छन्। जब ती गर्छन्, मार्केटिंग परिवर्तन हुनेछ र कम्पनीहरू यसको लागि राम्रो हुनेछ।
जब यो निगमहरूमा मूलधारको कारक हो, यो म जस्तो स्वतन्त्र ब्लगरको लागि जीवन परिवर्तन गर्न गइरहेको छ। कम्पनीहरूले निम्नको साथ खोजी गर्ने छन्, जसले राम्रोसँग लेख्न सक्छन्, र उनीहरूलाई सामानको झोलामा तान्ने छन्। यदि म चलिरहेको थिए भने HP, डेल, आईबीएम or सिस्को, म आज मेरो वेब उपस्थिति ब्लगर्सको साथ प्याडिंग गर्दैछु - तिनीहरू सबै भोलि जानु भन्दा पहिले।
जब सबैजना ब्लग गर्दै छन्, हामी कि त अरू कसैको स्पटलाइटमा पदोन्नति हुनेछौं वा अस्पष्टतामा फ्याकिनेछौं। सहज नहुनुहोस्, हामी यहाँ लामो समय सम्म रहनेछैनौं।
Vista सँग पीसीएन्ग बगका लागि कार्यक्षेत्र
जुन 7, 2008 बिहान 10:21 बजे
ओह, म कसरी ब्लगिङ सधैंभरि जान सक्छ भन्ने चाहन्छु। तर यदि मैले यथार्थपरक इच्छा जारी गर्नुपर्छ भने, म आशा गर्छु कि यो अझै5देखि 10 वर्षसम्म रहनेछ। मैले अझै पनि यस क्षेत्रमा आफूले चाहेको सफलता फेला पार्न सकेको छैन, यद्यपि मैले स्वीकार गर्नैपर्छ कि अन्य प्रयासहरूको कारणले (ब्लगिङ) को लागी मसँग साँच्चै जाने पर्याप्त समय छैन। तैपनि, म मेरो व्यक्तिगत ब्लगहरूमा, साथै म धेरै कमाउन चाहने ब्लगहरूमा पनि सफलताको अनुभूति गर्न चाहन्छु।
जुन 7, 2008 मा 12: 46 PM
मलाई लाग्छ कि परिवर्तनहरू टेक्नोलोजी विकसित हुँदै जाँदैछन्, हामीसँग हाम्रो काम गर्न विभिन्न उपकरणहरू हुनेछन् र त्यसले चीजहरूले फरक दिशा लिनेछ। एउटा उदाहरण अल्ट्रा पोर्टेबल पीसी हो, हामी सबैले ती मध्ये एउटा प्राप्त गर्न सक्छौं र त्यसको साथ सबै ठाउँबाट धेरै पटक ब्लगिङमा संलग्न हुन सक्छौं (सायद यो पहिले नै भइरहेको छ।)